Markabka kiciyay xiisadda Mareykanka iyo Iran oo lagu arkay biyaha Syria
Markabka kiciyay xiisadda US iyo Iran oo lagu arkay biyaha Syria
WASHINGTON, US – Sawirada markab Shidaal oo dhaliyay xiisadda Mareykanka iyo Iran ayaa lasoo bandhiyay kuwaasoo muujiinaya inuu ku sugan yahay dekad ku taalla dalka Syria, maalmo kadib markii la sii daayay.
Adrian Darya-1, kaasoo xambaarsan saliid cayriin ah ayaa ku xirtay dekada magaaladda Tartus ee dhacda badda Mediterranean-ka, kana tirsan Syria, sida ay sheegeen saraakiil Mareykan ah.
Bishii July, ciidamada Ingiriiska ayaa Markabkan ku qabtay xeebaha Jaziiradda Gibraltar markii looga shakiyay inuu kusii jeedo Syria, islamarkaana uu jebinayo cunaqabateynta Midowga Yurub.
Markabkan oo horey magaciisa loo oran jiray Grace 1 markii lagu qabanayay Gibraltar ayaa abuuray xiisad u dhaxaysay Mareykanka iyo Iran, kadib markii saraakiil American ah ay dalbadeen in aan lasii deyn.
Si kastaba, Maxkamada sare ee Jaziiradda Gibraltar ayaa ku gacan-seertay dalabka Mareykanka iyadoo amar ku bixisay in lasoo daayo 15-kii bishii lasoo dhaafay ee August, kadib markii ay damaanad-qaad ka heshay dowladda Iran oo ahayd inuusan aadin dhanka Syria.
Wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa xaqiijisay 5-tii bishan September in ay u balan-qaaday Kabtanka Markabka lacag malaayiin dollar ah, balse ku fashilantay qorshahaasi ah in dib loo soo qabto Grace 1.
Trump ayaa horey xilalka uga qaadey wasiiro diiday inay ku shaqeeyaan aragtidiisa.
Israel oo duqayn ku dishay askar u dhalatay Iran, Syria iyo dalal kale
Caalamka 12.05.2018. 11:44
Xulufadda Mareykanka oo billaabay inay kasoo baxaan Syria
Caalamka 11.01.2019. 15:26
Mareykanka: Ololahan ka socda Soomaaliya ma horseedayo xasilooni
Soomaliya 09.11.2019. 07:17
Sooyaalka Al-Baqdaadi: Mu'addin Masjid illaa iyo hogaamiyaha Daacish
Caalamka 27.10.2019. 10:49
Khayre oo ka warbixiyey ujeedka socdaalkiisa dalka Mareykanka
Soomaliya 17.10.2019. 06:34
Kenya oo dalab cusub kana dhan ah Al-Shabaab u gudbisay Mareykanka
Afrika 07.10.2019. 20:04